Saymaha Sicir-Bararka, Sarrifka Duulay Iyo Suuqa Madow”. Nuxurka War-Saxaafadeed Uu Xisbiga WADDANI Soo Saaray – | Gabiley News Online
Saymaha Sicir-Bararka, Sarrifka Duulay Iyo Suuqa Madow”. Nuxurka War-Saxaafadeed Uu Xisbiga WADDANI Soo Saaray –
December 19, 2015 - Written by admin
Odhaah Soomaaliyeed ayaa ahayd: “Af noolina waa hadlaa….” Maansayahankeennii waddaniga ahaa ee Cabdi Iidaan Faaraxna mararka uu arrin saro si asluubaysan wuxu u odhan jiray: “Anuu daaha kama rogin, dadku se wuu yaqaannaa.” Intaasi waa arar dadab-galkeed. Hoos aan u soo dego. 1980kii ayuu nidaamkii dalka ka talin jiray ku haftay sicir-bararkii, sarrifkii duulay iyo suuqii madoobaa ee dal iyo dadba aafeeyay.
Guddi ayuu u saaray soo baadha inta uu wixii kaarbuuno ama toosh Xamar yaallay u iibiyay oo ku yidhi meel kasta habeen iyo maalinba mara oo soo hela aafadan dalka ku habsatay. Waa aafo aan suuqyada iyo sariibadaha joogin ee samadaa sare iyo suuryooyin aan la gaadhayn heehaabaysay. Gaarriye ayaa inta uu dabka ugu xiddigiyay soo helay sababihii oo ka tiriyay maansada la magac-baxday “Hashii Cosob waa tan”
Xilliyadu isu ekaa……Guddiyadu isu ekaa……Afooyinku isu ekaa……Qaababka la doonayo in wax looga qabtaana isu ekaa……Xarrago iyo xishoodba waa hore ayaa laga jaqaafiyay. Dadka waxa loo haystaa dad aan waxba garanayn. Shaashadaha inta kolba mid doollarkii ku sawiran yahay inoo soo fadhiisto ayuu inaga dhaadhicinayaa denbi uu isagu leeyahay in uu kii geystay doon-doonayo iyaga oo ilamada yaxaaska saydhinaya. Garaadkeenna iyo garashadeenna ayaa la caayayaa. Tusaale nool oo aan meel fogba oollin aan idiin soo dhufto. Xafiisyada dawladda intooda badan cashuurta waxa lagaga qaadaa doollar. Haddaad Maaliyadda miisaaniyaddeenna weydiiso doollar ayay kuugu sheegayaan. Xukuumaddeennu maba qaadato shilinka Somaliland. Haddana sarriflayaashii ayay la shiraysaa oo ay weydiinaysaa sicir-bararka waxa keenay? Sarrifka duulay halka uu ka yimid iyo suuqa madow sababaha dhaliya. Waa Xisbi iyo Xukuumad is-xanbaarsan oo xanuunkaa iyo xanaftaa ay ina badeen weliba doonaya in aynu mar kale xanbaarno oo xukunka ku soo celinno.
Waa ay garanayaan xalka xaajooyinkan taban ee laga dhaqaaqi la’ yahay, ma se doonayaan in ay maaro u helaan oo dantooda kooxeed, qoys ama qofnimo ayaan ku jirin. Doollar-urursi baa jiraa meel keliya ku biyo-shubta oo cid keliyi ku biyo-shubato. Marka aad sidaa wax u dhalliisho cay ayay u yaqaannaan, mararka ay qaranka hadimaynayaanna magaca qaranka ayay hillaabtaan. Gaarriye miyaanu maansadiisa Hashii Cosob ku odhan:
Carruurtu ku heesin,
Markii col la sheego,
Cadaadda ku meere,
Hashii Cosob waa tan,”